Misy ny karazana association izay fehezin'ny lalàna 60-133 izay tsy mandray fanampiana avy amin'ny Fanjakana, misy kosa ny fikambanana izay antsoina hoe "Association d'utilité publique", izay misy didim-panjakana mihitsy mametraka azy, dia ireny no mahazo famatsiam-bola avy amin'ny fanjakana, fa mbola misy appel d’intérêt public koa aza no atao amin'izy ireny fa tsy avy dia ny fanjakana no manondro izay fikambanana tiany omena fanampiana.
Ny fanjankana dia tokony hitady vaha-olana maharitra amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, dia ny famokarana vary sy sakafo, fiompiana sy jono, fanampiana ireo tantsaha hamokatra, fa tsy andeha hiditra amin'ny famokarana koba aina, raha te hanao izany, misy ozinina malagasy efa mpanao izany, ka nahoana tsy ireny no ampian'ny fanjakana?
Raha misy mpandraharaha vahiny, na fondation te hanorina ozinina momba izany sakafo manome aina izany, dia arabaina tonga soa izy, fa tsy tokony hisy hidiran'ny fanjakana manokana, raha misy fanampiana tiana atao aminy, dia ampitovio amin'ny fanampiana omena ny fikambanana na orinasa malagasy hafa.
Ny vadin'ny Filoham-pirenena dia tsy manana toerana mihitsy eo amin'ny fitondrana ny fanjakana araky ny Lalampanorenana, tsy misy vola azo avoaka momba azy raha volam-panjakana no resahina. Resaka arofenitra na protocole ihany no ametrahana azy, ary ny vola karaman'ny Filoham-pirenena sy ny fiarovana azy sy ny fianakaviany no anjara azo omena azy.